iindlela zongeniso eziphucukileyo zeelwimi zasempuma asia – Ukusekela Windows 10
iindlela zongeniso eziphucukileyo zeelwimi zasempuma asia
Ukhetho lwendlela yongeniso ephucukileyo nezixhobo
Sebenzisa iprogram ehlela indlela yokufakwa kwenkcukacha (IME) ye-Microsoft ukuze ubhale ngeelwimi zaseMpuma Asia ozifakele kwi-PC yakho.
Cofa ekunene kwisalathisi sendlela yongeniso ukutshintsha iimowudi zongeniso, vula iphedi ye-IME, okanye uvule iisetingi ze-IME ezingakumbi. Kwezinye iilwimi, uza kuba nokhetho olungakumbi, njengesixhobo sesichazi-magama sesiJapan.
Yongeza igama kwisichazi-magama sesiJapan
I-IME yakho ingafumana abantu abangakumbi xa ulayita ingcebiso yelifu, esebenzisa i-Bing ukuncedisa ukubona kwangaphambili ukuba ubhala ntoni. Ukuze uyilayite, cofa ekunene kwisalathisi sendlela yokhetho yongeniso ukhethe Iipropathi. Emva koko ukhethe Eziphuculweyo uvule ithebhu yoNgeniso lokuBona kwangaphambili. Khetha ibhokisi yokhetho ecaleni kokuthi Sebenzisa icebiso lelifu.
Ukuze wongeze igama kwisichazi-magama ngesandla, yiya Iisetingi uze ukhethe Ixesha noLwimi. Ukusuka apha, yiya kokuthi Ingingqi noLwimi uze ukhethe ulwimi, ngokomzekelo, IsiJapan (日本語 ). Khetha Ukhetho. Ngoku yongeza igama elitsha nentsingiselo yalo, okanye uhlele igama elisele likho usebenzisa isiXhobo sesiChazi-magama soMsebenzisi.
Previous Previous post: khumbula iiphaswedi kwi-microsoft edge
Next Next post: jonga okanye ucime imbali yokubrawuza kwi-microsoft edge